Mampidi-doza i Georgia ho an'ireo mpitsidika ny reharehan'ny LGBTQ: tsy misy hevitra ny UNWTO SG avy any Georgia
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Mampidi-doza i Georgia ho an'ireo mpitsidika ny reharehan'ny LGBTQ: tsy misy hevitra ny UNWTO SG avy any Georgia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Georgia • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • LGBTQ • Vaovao • People • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fizahantany dia midika fandriam-pahalemana, fahatakarana manerantany ary fizahana kolontsaina hafa. Midika koa ny fitoviana sy ny fandeferana. Ny Repoblikan'i Zeorzia dia tsy naneho firy ny fahalalany azy taorian'ny naratra tamin'ny fakantsary iray tamin'ny fanafoanana ny Gay Pride noho ny herisetra.
Ny fieboeboana dia tsy hetsika manerantany ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ hiaraka haneho ny sainam-pirenena, ny fety, ny firesahana ary hifalifaly, ary hetsika fizahan-tany lehibe any amin'ny firenena maro manerantany koa io.
Tany amin'ny Repoblikan'i Georgia, olona an-jatony no nirohotra tao an-drenivohitra, Tbilisi, ny alahady taorian'ny nahafatesan'i Alexander Lashkarava, iray tamin'ireo mpanao gazety marobe no niharan'ny herisetra rehefa notafihan'ny vondrona mahery setra ny biraon'ny fampielezan-kevitra LBGT +, nahatonga ny mpikatroka hanala ny fankalazana ny Pride eto amin'ity firenena ity.
Ilay tompon'andraikitra amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany, Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO dia tsy te-hanome hevitra momba io olana io any Georgia. Zurab dia avy any Georgia.
IGLTA dia mpikambana ao amin'ny UNWTO, ny World Tourism Organization.
Ao amin'ny 2019
UNWTO dia manana sekretera jeneraly ao amin'ny Repoblikan'i Georgia izay tsy te-haneho hevitra momba ny toe-javatra mikorontana ao amin'ny fireneny taorian'ny nanafihana ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTQ, ka nanery ny fanafoanana ny Gay Pride, fitsangatsanganana sy fizahan-tany mahavariana any amin'ny firenena maro.
Nipoaka ny ady tany amin'ny parlemanta tany Georgia ny alatsinainy teo raha nanandrana niditra tao amin'ny trano ambany ny mpanao gazety sy ny mpanao politika mpanohitra noho ny fahafatesan'ny cameraman iray nokapohina nandritra ny herisetra natao tamin'ireo mpikatroka LGBT tamin'ny herinandro lasa teo.
An-jatony no nifamory tao an-drenivohitra Tbilisi ny alahady taorian'ny nahafatesan'i Alexander Lashkarava, iray amin'ireo mpanao gazety maratra mafy rehefa nanenjika biraon'ny fampielezana LBGT + ireo vondrona mahery setra, izay nanosika ireo mpikatroka hamono ny diaben'ny avonavon'izy ireo.
Ny Departemantam-panjakana amerikana tamin'ny talata teo dia niantso fitoniana tao amin'ny repoblikan'i Georgia taorian'ny fahafatesan'ny cameraman iray nokapohina nandritra ny herisetra natao tamin'ireo mpikatroka LGBT ary nilaza izy ireo fa ireo izay nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana milamina sy mpanao gazety dia tokony henjehina.
Ned Price, mpitondra tenin'ny Departemantam-panjakana tamin'ny fampahalalana vaovao tsy tapaka fa nanaraka ny toe-javatra tany Georgia i Washington ary nanolo-tena hahita ny tompon'andraikitra amin'izany izy ireo.
"Ny fiarovana ny mpanao gazety Zeorziana rehetra, sy ny maha-marim-pototra ny demokrasia sy ny Georgia, raha ny marina dia mitaky ny olona tsirairay nanafika mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana, sy ny mpanao gazety tamin'ny 5 sy 6 Jolay, na ireo izay nitaona herisetra, dia tokony ho fantatra, tokony ho izy ireo voasambotra ary nenjehina araka ny lalàna rehetra ”, hoy i Price.
“Ampahatsiahivinay ny mpitondra sy ny mpampihatra lalàna any Georgia ny amin'ny andraikiny miaro ny rehetra izay mampiasa ny zon'ny lalàm-panorenana. Ampahatsiahivinay azy ireo ny andraikiny miaro ny mpanao gazety mampiasa ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. ”